Kukosha kwekuva nenzvimbo yega muvaviri | Bezzia
Kukosha kwekuva nenzvimbo yega muvaviri
Maria Jose Roldan | 07/07/2021 22:00 | Hukama
Kuva nemumwe wako hazvireve kupedza maawa makumi maviri nemana pazuva nemunhu waunoda. Pane dzakawanda nguva, kupedza nguva yakawandisa pamwe chete kunogona kushatisa hukama pachahwo uye kuuisa panjodzi huru. Mukati mehukama, yega yega inofanirwa kuve nenzvimbo yayo yega pamwe nehumwe hukama hwepedyo. Hapana chakashata nguva nenguva kuenda kunonwa neshamwari kana kuenda kunotenga usina mudiwa.
Icho chokwadi chekuti iwe une nguva shoma kune yako, zvinoita kuti chisungo chisimbe uye hunhu hwehukama huwedzere. Muchinyorwa chinotevera, isu tichataura nezvekukosha kwekuti vaviri vacho vagone kunakidzwa nekuva vega uye kuva nenzvimbo diki yemunhu zuva nezuva.
1 Maitiro ekuita kuti mumwe wako ave nani uye asimbe
2 Iyo yega nzvimbo mune vaviri vacho
Maitiro ekuita kuti mumwe wako ave nani uye asimbe
Mune chero vaviri, vaviri vanhu vanofanirwa kuve neyakavanzika uye yepamoyo nguva izvo zvinobatsira kusimbisa hukama pachahwo. Izvi zvinoitwa nekuita akateedzana enongedzo kana kuraira kwatinokupa iwe nekukasira:
Mukana wevaviri ava unofanirwa kuremekedzwa nguva dzese kwete kupinda. Kunyangwe zvingaite senge zvakapesana, kukwanisa kupukunyuka kwemaminetsi mashoma kana maawa mashoma kubva pahukama, zvinobatsira kuti ive yakasimba kwazvo.
Rusununguko mukati mehukama chero hupi hwakakosha uye hwakakosha kuti iende zvakakwana. Kutadzisa mumwe wako nekumurambidza kuita zvimwe zvinhu, Izvo zvinongoda kudzikisira hukama uye kuhuita kuti husununguke zvishoma nezvishoma.
Vaviri vacho vanofanira kuziva nzira yekutaurirana uye kutaura nezve zvese pasina chero rudzi rwekuhwanda. Izvi zvinobatsira vese vanhu kunzwa zvakanyanya kuchengetedzeka muhukama, izvo zvakakunakira. Muchiitiko chekuti pasina kutaurirana kwakanaka pakati pezviviri, zvinokwanisika kuti kusavimbana kunotanga kuwana pasi uye vaviri vacho vari kupera simba nenzira ine njodzi.
Kudzora hakugone kuvapo mune chero mhando yevaviri iyo inogona kutorwa sehutano. Kudzora vanhu vane kushushikana kwakanyanya kwekuzviremekedza kwavanotumira kune mumwe wako. Kudzora kunongokonzeresa kuti hukama hupere zvishoma kana zvishoma uye inopedzisira ichityora nekufamba kwenguva.
Iyo yega nzvimbo mune vaviri vacho
Pakati pevaviri ava, munhu wega wega anofanirwa kuve nenzvimbo yake yega isingagone uye isingafanire kupindirwa nemumwe munhu. Kugona kuve nerusununguko kana zvasvika pakusangana neshamwari kana kuita zvimwe zvinhu kunze kwevakaroorana, zvinoita kuti hukama hwacho huve hunovandudza nekutsvaga kugara zvakanaka pamusoro pezvose. Izvo zvakakosha kuti nhengo dzevakaroora vanzwe kufara uye kugadzikana zvakanyanya sezvinobvira, kuitira kuti izvi zvive nemhedzisiro yakanaka pahukama pachahwo.
Rangarira kuti hazvikurudzirwe ramangwana rakanaka revaviri, kupedza maawa ese ezuva pamwechete. Kupfuuridza nguva, iko kuvanzika kwerusununguko kunoguma kwakanganisa zvakanyanya hukama hwacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Kukosha kwekuva nenzvimbo yega muvaviri
Bartolinitis, chii icho uye maitiro ekurapa
Zvirongwa zvaMassimo Dutti zvemazuva ako emahombekombe